जानी राखौ ! शरिरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन खानुहोस् यस्ता खानेकुरा – Enepali Samchar
e nepaalisqmchaqr// काठमाडौँ : शरीर स्वस्थ रहन फोक्सोले राम्रोसँग कार्य गर्न आवश्यक छ। फो’क्सोले फिल्टर गरेपछि मात्र अक्सि’जन शरीरको प्रत्येक भागमा पुग्छ।यस्तो अवस्थामा फो’क्सोको विशेष ख्याल राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि फोक्सोले राम्ररी काम कार्य गरेन भने दम, ब्रोन्का’इटिस, निमो’निया, क्षय’रोग, क्या’न्सर जस्ता घा’तक रोगहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।अर्कोतर्फ, को’रोनाभा’इरस महामा’रीबाट बच्नको लागि फो’क्सोलाई स्वस्थ राख्न स्वास्थ्य विशे’षज्ञहरूले सल्लाह दिन्छन्।
किनभने, को’रोनाभाइ’रस सिधै फो’क्सोमा प्र|हार गर्दछ, फलस्वरूप अक्सिजनको स्तर कम हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। को’रोनाभाइ’रसको दो’स्रो लहर चलेपछि अधिकांश बिरा’मीहरुलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। शरीरमा अ’क्सिजनको स्तर द्रूू’त रूपमा कम भइरहेको छ।
संक्र’मण भएको केहि दिनमै अक्सि’जनको स्तर ८० भन्दा कम भएको उदाहरणहरु सार्वजिक भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अक्सि’जन तुरून्त आवश्यक हुन्छ। यदि यस अवधिमा समयमै अक्सिजन उपलब्ध भएन भने अवस्था ग’म्भीर हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा पहिले देखिनै फो’क्सोको ख्याल गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
बेसार – बेसारमा एन्टी–अक्सिडे’ण्ट र एन्टी–इन्फ्ले’मेटरी गुणहरू हुन्छ जसले सबै प्रकारका संक्र’मणहरूबाट बचाउँछ । दैनिक सुत्नु अघि दुधमा बेसार मिलाएर पिउँदा निकै लाभदायक हुन्छ।यसैगरी, बेसार, गु’र्जो, दालचिनी, ल्वाङ, अदुवा र तुलसीको पात मिलाएर काडापानी बनाउन सकिन्छ। यसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नुका साथै रोग प्रति’रोधात्मक क्षमता पनि मजबूत गर्दछ।
मह – आयुर्वेदमा महको थुप्रै वर्णन गरिएको पाइन्छ। यसमा एन्टि–ब्याक्टे’रियल गुणहरू हुन्छन, जसले शरीरबाट वि’षाक्त तत्वहरु निकाल्न मद्दत गर्दछ र फोक्सोलाई पनि स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। महलाई बि’हान मन’तातो पानीमा कागतीको रस मिलाई पिउन सकिन्छ। यस बाहेक, महलाई काडा पानीमा पनि मिलाउन सकिन्छ।
तुलसी – तुलसी पातमा अ’धिक मात्रामा पोटा’सियम, आइरन, क्लो’रोफिल मैग्नीशि’यम, क्यारो’टीन र भिटामिन सी पाइन्छ। जसले फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ। दैनिकरुपमा ४ देखि ५ वटा तुलसीको पात चपाउँदा निकै प्रभाव\_कारी हुन्छ। यस बाहेक, तुलसी र गु’र्जोको काडा पानी पनि बनाउन सकिन्छ।
लसुन – लसुनमा एन्टिबा’योटिक, एन्टि’फङ्गल, एन्टि’वाइरल गुणहरूको साथसाथ क्या’ल्सियम, फा’स्फोरस, आइरन, भिटामिन जस्ता गु’णकारी तत्वहरूले समृद्ध हुन्छ। जसले फोक्सोलाई बलियो राख्न मद्दत गर्दछ।प्रत्येक बिहान खाली पेटमा २ देखि ३ वटा पोटी खाएमा ग्यास्ट्रिकलाई पनि ठिक गर्दछ। यदि लसुन त्यतिकै खाँदा पिरो हुन्छ भने यसलाई राति पानिमा भिजाएर र बिहान सेवन गर्न सकिन्छ।
बाबुराम भट्टराईको यस्तो कर्तुत बाहिरिएपछि महन्थ, राजेन्द्र र उपेन्द्र एकढिक्का, अब के गर्लान त बाबुराम!
जेठ ४ गते मंगलबार राशीफल, निकै राम्रो छ यी ५ राशिको भाग्य !